US / 32A (7.6KW) Abavelisi kunye nabaXhasi | Ifektri yase China / 32A (7.6KW)
Chwetheza inqanaba loku-1 leNqanaba le-2 elinyuswe ngodonga lwemoto kwi-Wallbox ngokuvunywa kwe-ETL
Umzi-mveliso ngqo i-China EV Ukutshaja indawo, i-EV yokutshaja iziBonelelo, ngeenjongo ze "zero defect". Ukukhathalela okusingqongileyo, kunye nembuyekezo kwezentlalo, ukukhathalela uxanduva lwabasebenzi kwezentlalo njengomsebenzi wabo. Samkela izihlobo ezivela kwihlabathi liphela ukuba zisindwendwele kwaye zisikhokele ukuze sikwazi ukufikelela kwiinjongo zokuphumelela kunye. Umsebenzi wethu kukuphuhlisa iimveliso zokuyila kubathengi abanamava amahle e-OEM / ODM yoMvelisi weChina EV Charger.
Nikezela ngeZitishi zokutshaja zeZithuthi zoMbane zoRhwebo ngeSatifikethi se-ETL
Ukubonelela ngeSitishi seChina semoto yokutshaja imoto, ukutshaja ngokukhawuleza, sizabalazela ukugqwesa, ukuphucula rhoqo kunye nezinto ezintsha, sizimisele ukusenza "ukuthembela kwabathengi" kunye "nabathengi bokuqala bezinto zokwenza izinto zobunjineli". Khetha thina, wabelana ngemeko yokuphumelela!
ETL 7.6kw AC EV Itshaja ene-Ocpp1.6J kunye nohlobo lwePlagi 1
Umgangatho olungileyo we-China EV charger, itshaja yemoto, kunye nenkonzo ephezulu kunye nebalaseleyo, siphuhliswe kakuhle kunye nabathengi bethu. Sebenzisa inkqubo epheleleyo yolawulo olusemgangathweni yesayensi, umgangatho olungileyo kunye nokholo oluphezulu, siphumelela ukuma okuhle kwaye sithathe olu qeqesho kuMgangatho oLungileyo China 32A Type1 SAE J1772 EV Charger. Ubungcali kunye nokwazi kuqinisekisa ukuba besisoloko sikonwabela ukuthembela kubathengi bethu kwimisebenzi yethu yeshishini. "Umgangatho", "ukunyaniseka" kunye "nenkonzo" ngumgaqo wethu. Ukunyaniseka nokuzibophelela kwethu kuhlala ngentlonipho kwinkonzo yakho. Nxibelelana nathi namhlanje Ngolwazi oluthe kratya, nxibelelana nathi ngoku.
Fumanisa ukuba iimveliso ezintsha ezivela ngokudibeneyo zinokunceda njani ekhaya, kwindawo yokusebenzela, nakwezinye iindawo zikawonke-wonke. Ukutshaja okuthembekileyo okukhawulezileyo kufanelekile kuyo yonke i-EV. Sebenzisa iplagi yendalo iphela yeJ1772 kwitshaja zezithuthi zombane zisebenza ngayo yonke i-EV kunye nePlagi-yeHybrid eUnited States naseCanada. Kubandakanywa iimodeli ezithandwayo ezinje nge, Chevy Bolt, Nissan Leaf, Ford Fusion, BMW i3, Chevy Volt, Toyota Prius, Chevy Spark, Jaguar I-Pace kunye ne-Audi e-tron. Nokuba iTesla isebenzisa iadaptha yayo esemgangathweni.